Man on High Heels (2014) Unicode ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Transgender(ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်သူ) ဖြစ်တဲ့ စုံထောက် Ji-Wook ရဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် အလွန်ထက်မြတ်တဲ့ စုံထောက်ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သဘောအရ လူဆိုးတွေ ဖမ်း ရင်း မိန်းမ အဖြစ်ပြောင်း ဖို့ တစ်ယောက်ထဲ ကြိုးစားနေသူပါ။ ငယ်ဘဝကတည်းက အခြောက်ဆိုပြီး အစခံရ အနိမ်ခံရတာကြောင့် အခြောက်ဆိုတာ ရွံစရာတစ်ခုအဖြစ် ကလေးဘဝကတည်းက ထင်မှတ်လာတဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ယောင်္ကျား ဆန်သထက် ဆန်အောင် အမြဲ ကြိုးစား လာခဲ့သူပါ။ နောက်ဆုံးတော့ သူရဲ့ လူဆိုးဖမ်းတဲ့ စုံထောက်အလုပ်က ထွက်လိုက်ပြီး မိန်းမ အဖြစ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဖို့ US ကို ထွက်ဖို့ လေဆိပ်ရောက်တဲ့ အခါ လူသတ်မှု သတင်းတစ်ခု ဟာ သူ့ကိုတားလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရန်သူတွေဟာ သူ ဂရုတစိုက် ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ...
IMDB: 6.6/10 1132 votes
Breakthrough (2019) Unicode ဒီတစ်ခေါက်တော့ True Story ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ( Drama ) ကားလေးတစ်ကားနဲ့သူငယ်ချင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဂျွန်ဆိုတဲ့မိဘအရင်းတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး မွေးစားမိဘတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ဘော်ဒါနှစ်ယောက်နဲ့ ရေခဲပြင်ဖြစ်နေတဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းဆော့ရာမှ ရေထဲကိုကျွံကျသွားခဲ့ပါတယ် ။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဂျွန်ကတော့ ရေအောက်မှာတော်တော်ကြာကြာနစ်မြှုပ်သွားခဲ့တယ် ။ သူ့ကိုပြန်ဆယ်လို့ရခဲ့ပေမဲ့ သူ့နှလုံးဟာအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး ၊ ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်လွန်းတဲ့သူ့မွေးစားအမေရဲ့ဆုတောင်းမှုတွေကြောင့် သူ့နှလူံးဟာပြန်ခုန်လာခဲ့ပါတယ် ၊ အဲဒီမှာတင်လူတိုင်းရဲ့ဂရုဏာသက်ချင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ ဂျွန်ကိုဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့ပြီး မမျှော်လင့်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကို ကြည့်ရှုရမှာပါ ။ မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေက ဘယ်လောက်တောင်စွမ်းအားကြီးသလဲဆိုတာ ဒီကားမှာသေချာပေါက်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြပါလို့ ပြောပါရစေဗျာ ။ Credit Review Zawgyi ဒီတစ်ခေါက်တော့ True Story ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ( Drama ) ကားလေးတစ်ကားနဲ့သူငယ်ချင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဂျွန်ဆိုတဲ့မိဘအရင်းတွေစွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး မွေးစားမိဘတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ဘော်ဒါနှစ်ယောက်နဲ့ ရေခဲပြင်ဖြစ်နေတဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းဆော့ရာမှ ရေထဲကိုကျွံကျသွားခဲ့ပါတယ် ။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဂျွန်ကတော့ ရေအောက်မှာတော်တော်ကြာကြာနစ်မြှုပ်သွားခဲ့တယ် ။ သူ့ကိုပြန်ဆယ်လို့ရခဲ့ပေမဲ့ သူ့နှလုံးဟာအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး ၊ ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချစ်လွန်းတဲ့သူ့မွေးစားအမေရဲ့ဆုတောင်းမှုတွေကြောင့် သူ့နှလူံးဟာပြန်ခုန်လာခဲ့ပါတယ် ...
IMDB: 6.2/10 7435 votes
Bomb City (2017) Unicode ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပါအဝင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမှာ ခြားနားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင် ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများက အသွင်အပြင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေဟာ အများနဲ့မတူတဲ့အခါ လှောင်ပြောင်ရယ်မော အပြစ်တင်တတ်ကြတာတွေရှိပါတယ်။အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေ၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုတွေ၊ လူမျိုးမတူညီတာတွေ ကစလို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမတူတာတွေအထိပေါ့ဗျာ။ဒီဇာတ်လမ်းကလေးကတော့ ၁၉၉၀ပတ်ဝန်းကျင် အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကမြို့လေးတစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုရိုက်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ပန့်ခ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့အမြင်တွေ ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ တရားဥပဒေဟာ သူတို့ဖက်မှာရှိမနေကြောင်းကို ရိုက်ပြထားပါ။ တရားဥပဒေဟာလူအများစုရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်သင့်ပါသလား။ဒီဇာတ်ကားဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မက်ဆေ့တော်တော်များများပေးထားတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အညွှန်းမှာရေးထားတာက အဲ့ဒီမက်ဆေ့တွေရဲ့အပိုင်းအစသေးသေးလေးပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုက ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်ကြီး Marilyn Manson လည်းဒီထဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားလေးဟာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ဦးနှောက်တစ်နေရာရာကို ထိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီမှာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Rating တွေအနေနဲ့ကတော့ IMDb – 7.2/10 Rotten Tomatos 83% Google Users 95% ဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Khant Linn ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအပါအဝင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျခားနားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။အေမရိကန္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသြင္အျပင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ေနထိုင္မႈဘဝပုံစံေတြဟာ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့အခါ ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ အျပစ္တင္တတ္ၾကတာေတြရွိပါတယ္။အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေတြ၊ ...
IMDB: 6.8/10 6623 votes
LEGO DC: Shazam – Magic & Monsters (2020) Unicode 2019 ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ Lego Batman ရဲ့ Credit Scene မှာBilly Batson လေး Wizard ဆီ ရောက်သွားတဲ့အခန်း ပါခဲ့ပါတယ်။ဒီLegoကားကတော့ အဲဒီကားရဲ့အဆက်ပါ။ဒီထဲမှာတော့ Shazam အစွမ်းတွေရပြီး ဘီလီကကမ္ဘာကြီးကို ပိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒီလို ကြိုးစားရင်းနဲ့ တစ်ရက်မှာ မထင်မှတ်ဘဲJustice League အဖွဲ့နဲ့ ဆုံမိတဲ့အခါမှာ အဖွဲ့သားတွေက သဘောကောင်းလွန်းတဲ့Shazam ကို အဖွဲ့ထဲ ဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတော့တယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Shazam ရဲ့ Villain တွေကို အကုန်လုံးနီးပါးထည့်သွင်းထားတာမို့လို့ DC fan တွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် Lego ကားလေးပါ။Credit Scene လည်း ပါတာမို့ စောင့်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi 2019 ခုႏွစ္ကထြက္တဲ့ Lego Batman ရဲ႕ Credit Scene မွာBilly Batson ေလး Wizard ဆီ ေရာက္သြားတဲ့အခန္း ပါခဲ့ပါတယ္။ဒီLegoကားကေတာ့ ...
IMDB: 6.2/10 649 votes
The Man with the Iron Fists2(2015) Unicode ၂၀၁၂ ကထွက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ အဆက်ဇာတ်ကားဆိုပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကွဲပါတယ်။ ပထမကားလောက်တော့မစွံပါဘူး။ One Bak ဇာတ်အိမ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလေးက တော်တော်အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ Fighting ကားကောင်းကောင်းကြည့်ချင်သူတွေအနေနဲ့တော့ ဒီကားကို ကြည့်ရတာတန်ပါတယ်။ ပထမကားတုန်းက ရိုက်ချက်တွေကောင်းနေသေးပေမဲ့ ဇာတ်အိမ်က ရိုးတော့ Rating ကျသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကဲမကြည့်ရသေးသူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Kyam ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ၂၀၁၂ ကထြက္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားရဲ႕ အဆက္ဇာတ္ကားဆိုေပမဲ့ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ကြဲပါတယ္။ ပထမကားေလာက္ေတာ့မစြံပါဘူး။ One Bak ဇာတ္အိမ္လိုမ်ိဳးျဖစ္သြားတာေလးက ေတာ္ေတာ္အားနည္းခ်က္ရွိပါတယ္။ Fighting ကားေကာင္းေကာင္းၾကည့္ခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီကားကို ၾကည့္ရတာတန္ပါတယ္။ ပထမကားတုန္းက ႐ိုက္ခ်က္ေတြေကာင္းေနေသးေပမဲ့ ဇာတ္အိမ္က ႐ိုးေတာ့ Rating က်သြားတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကဲမၾကည့္ရေသးသူေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Kyam ျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 4.4/10 3769 votes
The Rhythm Section (2020) Unicode ဒီကားကတော့ 2020 မှာ ထွက်ထားတဲ့ မင်းသမီး Blake lively ရဲ့ အသစ်စက်စက် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ Blake lively ရဲ့ Gossip Girl series ၊ The age of adaline တို့နဲ့မတူတဲ့ သူမရဲ့ အခြားပုံစံ တစ်မျိုးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီကားထဲမှာတော့ စတီဖန်နီဆိုတဲ့ကောင်မလေးက သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကို လေယာဉ်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူပါ။ အဲ့အချိန်ကနေစပြီး ၃ နှစ်တာကာလကို သူမကိုယ်သူမ လူသေတစ်ယောက်လို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာပါ။ အဲ့နောက်မှာတော့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဟာ မတော်တဆမှုမဟုတ်ပဲ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မှန်း သူမသိလိုက်ရတဲ့အခါ လက်စားပြန်ချေဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ Credit Review တိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းတွေကိုပါ ကြိုးစားသင်ယူရင်း အထီးကျန်ကြောက်ရွံ့နေသူကနေ ရဲရင့်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ CIA မှလူတစ်ယောက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပြီး အပြစ်ရှိသူတွေ လေယာဉ်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်ကြံစည်သူတွေကို ဘယ်လိုလက်စားပြန်ချေပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိရဖို့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ။ Zawgyi ဒီကားကေတာ့ 2020 မွာ ထြက္ထားတဲ့ မင္းသမီး Blake lively ရဲ႕ အသစ္စက္စက္ ...
IMDB: 5.2/10 7393 votes
Constantine (2005) Unicode မက်ထရစ်နဲ့ speed စတဲ့ ဇာတ်ကားတို့အပြင် John Wick ဇာတ်ကားတို့ရဲ့သရုပ်ဆောင် ကမ္ဘာကျော်မင်းသား Keanu Reeves ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ 2005 ခု နှစ်မှာထွက်ရှိထားပြီး ဒါရိုက်တာ Francis Lawrence က ရိုက်ကူးပြီး ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ အကုန်အကျခံကာရိုက်ကူးခဲ့တာ ရုပ်ရှင်အတွက် ပြန်ရတဲ့ငွေကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၃၀ ပဲဖြစ်ပါတယ် IMDb Rating မှာလည်း 6.9 ရရှိထားပါတယ်.. ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ ဂျွန်ကွန်စတန်တင်းဟာ နတ်ဆိုးတွေကိုအမဲလိုက်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.. မကောင်းဆိုးဝါးတွေ..ကြားထဲမှာပဲ သူ့ဘဝကိုရှင်သန်ပြီး..သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကြောင့်သူသေရင် ငရဲကိုသာ သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်..ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်တာကြောင့် အဆုတ်တခုလုံးစုတ်ပြတ်သတ်နေပြီး သေဖို့အချိန်ကလည်းနီးကပ်နေပါပြီ..ကွန်စတန်တင်းဟာ သူသေရင် ငရဲအစားကောင်းကင်ဘုံကို တက်ရဖို့အတွက်..စွန့်စားမှုတခုကို အမြဲတမ်းလိုက်ရှာပြီး လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်..သူ့ရဲ့ဝိဉာဉ်ဟာငရဲနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကလည်း ယူဆတဲ့အတွက် သူ့ကိုအမျိုးမျိုးသတ်ဖို့ကြိုးစား..စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေကြပါတယ်. တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ညီမဖြစ်သူကို မကောင်းဆိုးဝါး နတ်ဆိုးတွေလိုက်လံနှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာ..ဂျွန်ဟာ အဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကနေ ကူပါတော့တယ်.. ကောင်းကင်တမန် ..နဲ့..နတ်ဆိုးတွေ..အပြင်..နတ်ဆိုးဘုရင် လူစီဖာ နဲ့ပါ..ပါဝင်ပတ်သတ်မှုတွေနဲ့အတူ ဂျွန် ကွန်စတန်တင်းရဲ့ စွန့်စားမှုတွေ..ခပ်မိုက်မိုက်ရိုက်ချက်တွေကို ဆက်လက်ရှုစားကြပါ Review Credit Zawgyi မက္ထရစ္နဲ႔ speed စတဲ့ ဇာတ္ကားတို႔အျပင္ John ...
The Devil’s Advocate (1997) Unicode အခုတလော အင်တာနက်မှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသား Keaneu Reeve ရဲ့ 1997 ကSupernatural, Mystery ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ The Devil’s advocate ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာတ်ကားလေးရဲ့နာမည်က Devil မကောင်းဆိုးရွား Advocate ကိုယ်စားပြောပေးသူတဲ့ဒါပေမဲ့ Devil’s Advocate ဆိုတာ ရှေ့နေလို့ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ Charlize Theron, Al Pacino တို့လို နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။Florida က မြို့လေးတစ်မြို့မှာ အမှုရှုံးဖူးတာမရှိ စံချိန်တင်ထားတဲ့ ရှေ့နေလေးတစ်ယောက် ကျင့်ဝတ်နဲ့ အောင်မြင်မှုမှာ အောင်မြင်မှုကိုရွေးပြီးတော့ အမြင့်ဆုံးကိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားရင်း ကြုံရတဲ့အကြောင်းတွေပါ။သဘာဝလွန် ဆန်းပြားတဲ့ ကိစ္စတွေကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်။လူတွေကို အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်အောင် မောင်းနှင်နေတဲ့ အရာတွေရှိပါတယ်။ဒီရှေ့နေလေး ရဲ့ ဘယ်အရာက သူ့အတွက် အသက်ရှင်ချင်အောင် မောင်းနှင်နေလဲဆိုတာတော့….. Credit Review Zawgyi အခုတေလာ အင္တာနက္မွာ ...
IMDB: 7.5/10 318036 votes
Bohemian Rhapsody (2018) Unicode လန်ဒန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရအသံသွင်းစတူဒီယိုတခုမှာ ပီယာနိုအကြီးကြီးတလုံးနဲ့အတူ အလုပ်ရှုပ်နေသူက Freddie Mercury ။ သူက ဒီပီယာနိုအကြီးကြီးကို သိပ်သဘောကျတာ။ Bechstein တံဆိပ် Grand Piano ကြီးပေါ်မှာ စာရွက်အတိုအပိုင်းအစလေးတွေ အများကြီးပွစာကြဲနေတယ်။ Freddie တယောက် ပီယာနိုကိုနည်းနည်းတီးလိုက်၊ သီချင်းစာသားတချို့ချရေးလိုက်ပေါ့။ ခက်တာက သူရေးနေတဲ့ သီချင်းက အပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတာ။ အဲဒီကို control room ထဲမှာရှိတဲ့ Queen ဝိုင်းသားတွေက စိတ်ရှည်လက်ရှည်ထိုင်ကြည့်နေတာ။ ဘာမှ ဝင်မပြောဘူး။ တခုပဲသိချင်တာ သီချင်းသံစဉ်တွေက ဘာလို့အပိုင်းပိုင်းအပြတ်ပြတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သူတို့သိပ်သိချင်တယ်။ Freddie ကြီးရေးနေတဲ့သီချင်းနာမည်က Bohemian Rhapsody တဲ့။ သီချင်းကိုစလယ်ဆုံးဖန်တီးသူက Freddie Mercury ပါပဲ။ သူ့အတွက်ဒီသီချင်းက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့် ခါတိုင်းသီချင်းရေးသလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူ့မှ မတိုင်ပင်ပဲ ကိုယ့်ဖာသာရေးတယ်။ သူ့အတွက်အရမ်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆန်လွန်းလို့။ ဒီသီချင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုက အတော်လေးဆန်းကျယ်တယ်။ သီချင်းက ၆ မိနစ်လောက်ရှည်ပေမယ့် သံပြိုင်အပိုဒ်မပါဘူး။ အင်ထရို၊ ...
5 Centimeters Per Second (2007) Unicode CoMix Wave Film Production ကပဲ ဖြစ်ပြီး Directorကလဲ Makoto Shinkaiပါပဲ 2007 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ 65 mins ကြာမြင့်တဲ့ Drama, Romance Anime Movieတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Cherry Blossoms, Cosmonaut နဲ့5Centimers per Second ဆိုပြီး အပိုင်းသုံးပိုင်းပါရှိပြီးတော့ အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီဟာ Takakiဆိုတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးတွေအကြောင်းကိုရိုက်ကူးပြထားပါတယ် 1990 အစောပိုင်းကနေ အစပြုကာ 2008ခုနှစ်ထိပြောင်းလဲလာပုံတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ Anime Movieတွေထဲမှာ Reality အဆန်ဆုံး Animeလို့ ကျွန်မကတော့ထင်ပါတယ် ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အချစ်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့ အသက်ကြီးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ကိုယ်တွေးခဲ့သလို စိတ်ကူးယဉ်မဆန်ဘူးဆိုတာနဲ့ လက်တွေ့မကျဘူးဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Khant Linn ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi CoMix Wave Film Production ကပဲ ျဖစ္ၿပီး Directorကလဲ Makoto Shinkaiပါပဲ 2007 ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ 65 mins ၾကာျမင့္တဲ့ Drama, Romance Anime ...
IMDB: 7.6/10 48256 votes
Alice Through the Looking Glass (2016) Unicode Alice Through the Looking Glass ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၁၀ တုန်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Tim Burton ရဲ့ Alice in Wonderland ဆိုတဲ့ fantasy ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပါ။Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway နဲ့ Helena Bohnam Carter တို့ကသူတို့ရဲ့ အရင်ဇာတ်ရုပ်တွေအတိုင်း ဆက်ပြီးသရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကောင်သစ်တွေအနေနဲ့ Rhys Ifans ကို Mad Hatter ရဲ့အဖေဇာတ်ကောင် နဲ့ Sacha Baron Cohen ကိုလူတစ်ပိုင်းနာရီတစ်ပိုင်းဇာတ်ကောင်တို့အဖြစ် တွေ့ရမှာပါ။Effect တွေ၊ Costume တွေ၊ ဆက်တင်တွေကတော့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဦးမယ်ဆိုတာကိုတော့ တွေးကြည့်ယုံနဲ့တင် သိသာပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အရင်ဒါရိုက်တာ Tim Burton က producer အဖြစ်ဘဲတာဝန်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီး ...
IMDB: 6.2/10 77,466 votes
Alice in Wonderland (2010) Unicode ယုန်လေးတစ်ကောင်နောက်ကို စူးစမ်းပြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ အဲလပ်လေးတစ်ယောက် သူစိတ်ကူးထားတဲ့သူတကယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ထူးဆန်းပြီး အပြင်မှတကယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်…မြင်မြင်သမျှအရာအားလုံးက သူမအတွက်တော့တကယ်ကိုအထူးဆန်းတွေချည်းပဲဖြစ်နေလို့နောက်ဆုံးတော့ သူမအိမ်ကိုပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်…အဲ…ဒါပေမယ့် သူမအိမ်ပြန်ဖို့လမ်းရှာနေတဲ့အချိန်မှာ အနီရောင်ဘုရင်မနဲ့စတွေ့ပါတော့တယ်…အနီရောင်ဘုရင်မကတော့ ရက်စက်တဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိသူပါ…ဒီလိုရက်စက်တဲ့ အနီရောင်ဘုရင်မလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်အောင် အဲလပ်လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ…သူမအိမ်ကောပြန်ရောက်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…. Credit - Review Zawgyi ယုန္ေလးတစ္ေကာင္ေနာက္ကို စူးစမ္းၿပီးလိုက္ခဲ့တဲ့ အဲလပ္ေလးတစ္ေယာက္ သူစိတ္ကူးထားတဲ့သူတကယ္ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ ထူးဆန္းၿပီး အျပင္မွတကယ္မျဖစ္ႏိုင္တဲ့စိတ္ကူးယဥ္ကမာၻေလးထဲကိုေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္…ျမင္ျမင္သမွ်အရာအားလုံးက သူမအတြက္ေတာ့တကယ္ကိုအထူးဆန္းေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ေနလို႔ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူမအိမ္ကိုျပန္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္…အဲ…ဒါေပမယ့္ သူမအိမ္ျပန္ဖို႔လမ္းရွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အနီေရာင္ဘုရင္မနဲ႔စေတြ႕ပါေတာ့တယ္…အနီေရာင္ဘုရင္မကေတာ့ ရက္စက္တဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္ေယာက္မရွိသူပါ…ဒီလိုရက္စက္တဲ့ အနီေရာင္ဘုရင္မလက္ထဲကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အဲလပ္ေလးဘယ္လိုလုပ္မလဲ…သူမအိမ္ေကာျပန္ေရာက္ႏိုင္မလားဆိုတာ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ၾကည့္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္…. Credit - Review
IMDB: 6.5/10 354,109 votes
Bring Me Home (2019) Unicode ကလေးသူငယ်တွေ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှု လူကုန်ကူးမှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခံရမှုတွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့တဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနေပါတယ် အခုလက်ရှိမှာလည်း Pizzagate အရှုပ်တော်ပုံပြဿနာကို လူတွေစိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ် ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း ကလေးသူငယ်တွေ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ပြဿနာကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ Drama / Thriller ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ချန်ဂင်လို့ လူသိများတဲ့ မင်းသမီး Lee Young-ae ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် (ယူတို့ရဲ့ အချစ်တော် လီထယ်အို့(Park Hae-Jun)လည်း ပါသေးတယ်နော် 😁) ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ကင်မြောင်ဂွတ် နဲ့ ဆောဂျန်ယွန်းတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်လောက်က သူတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေး ကင်ယွန်းဆု ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ် ကင်မြောင်ဂွတ်ဟာ အလုပ်ထွက်ပြီး သားကို နေရာအနှံ့လိုက်ရှာခဲ့ပေမယ့် မတွေ့ခဲ့ပါဘူး တစ်နေ့မှာ သားကိုရှာရင်း မြောင်ဂွတ်ဟာ အက်စီးဒန့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် ဆောဂျန်ယွန်းဟာ သားရဲ့ သဲလွန်စတစ်ခု ရရှိခဲ့ပြီး သားကို ရှာပုံတော် ထွက်ခဲ့ပါတယ် လူတွေ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး ငါးမျှားကြတဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာ လူတကာခိုင်းတာကို ...
Bluebeard (2017) Unicode ဂန်းနမ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းလေးဖွင့်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေတဲ့ဒေါက်တာဗြောင်းဆန်းဟွန်း တစ်ယောက် ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်သူ့ဆေးခန်း ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ အခြားပြည်နယ်တစ်ခုကဆေးရုံတစ်ခုမှာ ဆရာဝန်အနေနဲ့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်ဖို့အတွက် သားသတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ထပ်မှာငှားရမ်းနေထိုင်ရင်း အောက်ထပ်က သားသတ်ဆိုင်ကလူတွေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်း ပိုပိုပြီး ရင်းနှီးလာခဲ့တယ်သူသွားနေထိုင်ရတဲ့ ဒေသက မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်တစ်နေ့မှာတော့ သူနေတဲ့နေရာနားတစ်ဝိုက်မှာ ဦးခေါင်းပြတ်အလောင်းတစ်လောင်း ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်အမှတ်မထင်ပဲ ဒီအမှုက သူ့အောက်ထပ် သားသတ်ဆိုင်က သားအဖနှစ်ယောက်နဲ ံပတ်သက်မှုရှိတာကို သိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီပတ်သက်မှုတွေကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပြီး အမှုမှန်ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ဒေါက်တာဆန်းဟွန်းရဲ့ဇနီးပါ ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့်စိတ္တဇ လူသတ်သမားက သားသတ်ဆိုင်က သားအဖ လား ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပဲလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စောင့်ကြည့်ရင်း အဖြေရှာကြပါစို့ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်း Scrn ပါ) Zawgyi ဂန္းနမ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းေလးဖြင့္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနတဲ့ေဒါက္တာေျဗာင္းဆန္းဟြန္း တစ္ေယာက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္သူ႔ေဆးခန္း ပိတ္သိမ္းလိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ အျခားျပည္နယ္တစ္ခုကေဆး႐ုံတစ္ခုမွာ ဆရာဝန္အေနနဲ႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္အဲ့ဒီေဒသမွာေနထိုင္ဖို႔အတြက္ သားသတ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရဲ႕အေပၚထပ္မွာငွားရမ္းေနထိုင္ရင္း ေအာက္ထပ္က သားသတ္ဆိုင္ကလူေတြနဲ႔လည္းတျဖည္းျဖည္း ပိုပိုၿပီး ရင္းႏွီးလာခဲ့တယ္သူသြားေနထိုင္ရတဲ့ ေဒသက မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကြင္းဆက္လူသတ္မႈေတြနဲ႔နာမည္ႀကီးတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူေနတဲ့ေနရာနားတစ္ဝိုက္မွာ ...